Iràna · Avrily, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Avrily, 2008
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Avrily, 2008
Tselatra · Israely18 Avrily 2008
Tselatra · Fanatanjahantena13 Avrily 2008
Tselatra · Fivavahana13 Avrily 2008
Nisy baomba nipoaka tao amin'ny môskea iray nandritra ny fotoam-pivavahana Asabotsy tao an-tanànan'i Shiraz atsimon'i Iran,Olona valo farafahakeliny no maty tamin'izany ary 66 no naratra. Sayetanha,mpamaham-bolongana avy ao Shiraz, no niteny[Fa] fa maro no maty fa tsy voa kosa ny mpitondra fivavahana.
Namoaka sary vitsivitsy tamin'ny (taoriana) fipoahana baomba tao amina moskea iray tany atsimon'i Iran izay tao an-tanànan'i Shiraz ka nahafatesana olona 8 farafahakeliny i Erfan avy ao amin'io tanàna io ihany. Nilaza moa ny mpamaham-bolongana fa matahotra izy ny hampiseho ny fakantsariny hany ka tamin'ny findainy avokoa no nakany ny sary.
Tselatra · Fitantanam-pitondrana09 Avrily 2008
Mahmoud Ahmadinejad, Filoha Iraniana, tamin'ny famahanam-bolongana farany nataony, no niteny [Fa] fa mila fanavaozana ny firenena ary tsy tokony afangarontsika ny fahakamoana sy ny fifikirana amim-pahalalàna ny nentim-paharazana.Niangavy ny olona izy tsy hatahotra ny fanavaozana.
Tselatra · Fitantanam-pitondrana05 Avrily 2008
Tselatra · Ady & Fifandirana05 Avrily 2008
Tontolo_iainana01 Avrily 2008